Gazety faha-500 sambatra ho anao! | Martech Zone
Hafatra 500 am-pifaliana ho anao!
Talata, Martsa 27, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Ok, lahatsoratra maherin'ny 500 mahery izy io saingy nanadino aho ary tsy nety azy. 8 volana teo ho eo no nanaovako bilaogy ary nahavita tsara.
Ny Technorati, Power 150 ary Alexa ambony lavitra noho izay noheveriko azy ireo ny laharana. Tena mahazo fidiram-bola madio amin'ny bilaogy koa aho - lavitra izany John Chow sata, fa ampy hitazonana ahy amin'ny fahazarana tsy matavy-tsy-karavasy-grande-mocha-starbucks.
Ahoana no nataoko? Asa mafy. (Tsindrio ny rohy: Isaky ny mijery an'i Loren aho, te-handeha amin'ny lalao Yankees, hihinana alika kely ary hanipy labiera amin'ireo mpankafy Red Sox!)
Hatramin'ny nanontanian'i Loren dia miarina matetika amin'ny bilaogy 3AM (indraindray mandritra ny alina) aho. Mipetraka any Indianapolis aho ka tsy manam-potoana hivoahana amin'ireo rahalahiko Silicon Valley - saingy gaga aho fa nanohy nifandray sy teo an-tampon'ny fironana tamin'ny fizarana ny fotoako teo amin'ny fikarohana, ny fitsapana, fifampizarana, fampifandraisana, fanararaotana ary fientanam-po.
Ohatra: Omaly alina ary androany dia nahita Geo Microformats ary fampiharana azy ireo amin'ny Amboary ny adiresy ho an'ny namana vaovao Andy avy any Angletera.
Tokony hankalaza aho fa tsy hahita an'ity fety ity aho anio hariva. Angamba hanandrana zavatra iray aho amin'ny famoahana bilaogy 1,000… Tsy azoko antoka. Fantatro fa ny fiovana lehibe dia eo amin'ny faran'ny fiainako noho ny fahaizako vao hita nampifandray ny olona sy ny haitao tamin'ny alàlan'ny bilaogiko. Tsara foana aho nahita sy nizara vaovao. Nanome fampitaovana tonga lafatra ny bilaogy mba hahatratra ny ankamaroan'ny olona amin'ny fomba mahomby. Nahatratra 100,000 mahery aho tamin'izay… olona 5,500 5,500 tamin'ny andro tsara indrindra vitako. Mahatalanjona ahy izany. Tsy azoko an-tsaina ny firesahana amin'ny olona XNUMX XNUMX ao anatin'ny iray andro fa vitako izany.
Ny marina dia mahafa-po kokoa noho ny rehetra ny fanaovana bilaogy asa izay efa nananako. Ireo mpamaky izarako vaovao dia tsara fanahy, mahalala fomba, manaja, mankasitraka ary manao ny marina. Nanampy bilaogera an-jatony manokana aho hanatsara ny bilaogin'izy ireo - ary tsy ho vitako izany raha tsy nisy ny fanampian'ireo bilaogera talohako izay nizara tamim-pitiavan-tena. Misaotra azy ireo aho noho ny hafanam-po sy ny fikarohana tsy an-kijanona ho an'ny valiny tadiavinay rehetra. Ary koa, misaotra ireo havako akaiky izay manohy mamporisika ahy aho ary milaza amiko fa fantatr'izy ireo fa misy ny ho avy amiko.
Ka… Sambatra faha-500 nareo rehetra. Misaotra namaky. Misaotra ny fizarana. Misaotra aingam-panahy ahy hiasa mafy kokoa noho ny hatramin'izay. Tsy raharaha lehibe hatrizay ny fitorahana bilaogy, fa ny fitiavako azy. Tsy ampy ny boky, lahatsoratra, bilaogy, fanehoan-kevitra na teknolojia. Ankehitriny aho dia mazoto miasa amin'ny orinasa momba ny tetikadin'izy ireo amin'ny bilaogy - zavatra tsy ho noeritreretiko ho nataoko 8 volana lasa izay.
Araka ny nametrahan'i Loren azy (mivantana izany), izaho am bilaogera A-List. Tsy mila miditra anaty lisitra ara-batana aho. Satria miverina ianao ary mizara ny dinika miaraka amiko isan'andro dia nataonao laharana 1. Tonga aho! Tsy raharahako izay lisitra na laharana aseho. Manana adidiko bebe kokoa aminao aho noho ny fiheverana nomenao ahy.
Manantena aho ny hahita izay hitondran'ireo paositra 500 manaraka anay.
Tags: Lahatsoratra bilaogy 500bilaogy Lahatsoratra
Indraindray ny Macs tsy marani-tsaina izany
Mar 27, 2007 ao amin'ny 9: PM PM
Faly fa tsy izaho no voalohany naneho hevitra. Raha izaho aloha dia manahy aho sao hihevitra ianareo fa maneho hevitra fotsiny aho mba hahazoako trafika ao amin'ny bilaogiko. Nampianatra ahy izany ianao ry brutha. Tohizo hatrany. Ny fahalalahan-tananao dia efa nampanan-karena anao tamin'ny namana… Manantena aho fa hitombo koa ny kaontinao amin'ny banky!
Sarobidy kokoa noho ny kaonty any amin’ny banky ny fisakaizana, Pat. Nanova ny lahatsoratra aho (talohan'ny nanehoanao hevitra) ary tena nanipy rohy mankany amin'ny blôginao momba ny "namana" mba hahazoanao an'io rohy io ihany. Manohy mampahery ahy ianao ary manao ahy ho noana bebe kokoa. Manana dibs voalohany ianao amin'ny rohy "namana" eto.
Ho an'ireo izay tsy mahafantatra an'i Pat, matetika izahay dia mifampiresaka amin'ny telefaona amin'ny fiaranay mba hiasa ary miresaka momba ny fanovana an'izao tontolo izao (na manandrana). Manana bilaogy mahafinaritra i Pat – tsara lavitra noho ny ahy ny fahaizany manoratra ary zavatra iriko ny fahaizany mampifandray ny soratra masina amin'ny fiainana.
Nanomboka orinasa nahomby maromaro i Pat ary mahafantatra tsara kokoa noho ny olon-drehetra ny dikan'ny hoe namana, mpanjifa ary marketing. Heck, nentiny tany amin'ny Superbowl mihitsy aza ny Colts! Nanampy kely io lehilahy Peyton io.
Misaotra ry Pat!
Mar 27, 2007 ao amin'ny 8: PM PM
Mirary soa ho anao!! Mahafinaritra fotsiny.
Misaotra Loren! Iray amin'ireo manentana ny maro ianao!
Mar 27, 2007 ao amin'ny 10: PM PM
Arahabaina, Doug. Nahafinaritra ahy ny namaky ny blôginao ary niandrandra 500 fanampiny. Mandeha ny tsaho fa afaka manangona fisotroan-dronono ny bilaogera aorian'ny lahatsoratra faha-1000 – ka inoako fa ao anatin'ny krizy eo anelanelan'ny bilaogy ianao amin'izao fotoana izao. 🙂
Arahabaina Doug! Tonga lavitra ianao tao anatin'ny fotoana fohy.
Araka ny voalazanao, indray andro ary mandefa amin'ny fotoana iray…
Raha tsy noho ny fitorahana bilaogy dia tsy ho lasa mpinamana isika… koa tahaka anao, dia mankasitraka ny fitorahana bilaogy sy ny fifandraisana nataoko nandritra ny taona maro aho…
Mahaliana ny fandehan'izany rehetra izany… Nitoraka bilaogy nandritra ny 9 taona mahery aho ary nifankahita tamin'olona be dia be, nianatra teknolojia vaovao maro ary nanohy ny truckin fotsiny araka ny filazan'izy ireo…
Farany, amin'ny hetsika mampientam-po, manomboka amin'ny fomba iray aho amin'ny alàlan'ny URL-ko vaovao… ho tsara ny mahita ny toerana misy azy ao anatin'ny taona maro… Manantena aho fa hiaraka amin'ilay dia ianao.
Misaotra, Sean. Nanolotra toro-hevitra SEO sy CSS tsara ho ahy ianao nandritra ity vanim-potoana ity ary tena mankasitraka ny fanampiana rehetra aho! Ianao koa no mpiandry ahy IE6 (yuck!).
Miandrandra toro-hevitra fanampiny… toy ny fahafantarana hoe nahoana ny Pagerank-ko no toa aotra foana! Omeo fanampiana aho Google-Boy!
Arahabaina i Doug avy amin'ny bilaogera 3AM hafa. Ataovy izany Starbucks manaraka ho lehibe fanampiny na inona na inona 🙂
Mar 28, 2007 amin'ny 11: 55 AM
Indy mpitoraka blaogy manao hoe Salama 🙂
Mar 28, 2007 ao amin'ny 9: PM PM
Arahabaina! Mampahery ny mahita ny asa mafy rehetra nataonao tao anatin'ny herintaona sy ny haingana nitomboany. Mitady handefa #1000 koa aho.
Mar 31, 2007 ao amin'ny 1: PM PM
Asa tsara, Andriamatoa Karr!
Mar 31, 2007 ao amin'ny 2: PM PM